१०१ वर्षकी बयोवृद्धा महिलाले जन्माईन् स्वस्थ बच्चा ! • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
एजेन्सी । विज्ञानलेपनि अनौठो कुरालाईपनि सम्भव बनाएको छ । सुन्दै अनौठो लाग्ने १०१ वर्षकी बयोबृद्धा महिला आमा बनेकी छन् । उनले स्वस्थ बच्चाको जन्म दिएर विज्ञानलाई समेत आश्चर्यचकित बनाएकी छन्। १०१ वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउने ति वृद्धा इटालीकि हुन उनले अहिले १७ औँ सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन्। उनले यो कुराको सावित गरेकी छन् की महिलाको प्रजनन क्षमतालाई उमेर छेक्दैन् ।
उनले चिकित्सकको आलोचनाका बाबजुत अण्डासय प्रत्यारोपनबाट उक्त बच्चालाई जन्म दिएकी हुन्। टर्कीको एक निजी क्लिनिकमा डा एलेक्जेन्ड्रो पोपोलिकीद्धारा वृद्धाले अण्डाशयको प्रत्यारोपन गराएकी थिइन्। उक्त प्रत्यारोपण सल्यक्रियाका बावजुत पनि वृद्धाले स्वस्थ बच्चाको जन्म दिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
उनले आफ्नो बच्चाको जन्मलाई भगवानको आर्शिवाद मानेकी छिन्। उनका अनुसार १६ औँ बच्चाको जन्म दिने समयमा उनी ४८ वर्षकी थिइन्। उक्त समयपछि डिम्बगन्थ्री क्यानसरका कारण उनको आमा बन्ने चाहना अपुरो रहेको भएपनि यो उमेरमा भने उनले आफ्नो चाहनालाई पुरा गरेकी हुन्।
हेर्नुहोस् यो हो ब्रमाण्डको महाप्रलय कुर्दै गरेको ठाउँ, जहाँ झरनाले जोगाइरहेको छ आगोको लप्का !
यस कारण पत्नीले काटिन् लोग्नेको यौनांग
रसियाको यो नदीमा एक्कासी रगत बगेपछि स्थानियवासी आश्चर्यचकित, मन्त्रालयले विज्ञप्ती नै निकाल्यो